Fonzarelli Arthur 50 – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2020
80 घण्टा पछि 1%
आर्थर अस्ट्रेलियाबाट इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता फोन्जरेल्लीबाट एक इलेक्ट्रिक स्कूटर हो। कम्पनीको नाम चरित्र फोन्जीबाट प्रेरित भएको थियो १ 60 .० को टिभी कार्यक्रम हेप्पी डेजबाट । कम्पनीको क्रेको “Bespoke styling. Amped up performance. And most importantly, zero emissions” ।
आर्थर स्कूटर किफायती हुनको लागि डिजाइन गरिएको हो र औसत दैनिक प्रयोगको साथ प्रति हप्ता लगभग $ १ AUD खपत गर्दछ।
स्कूटरमा km०० किमी / घन्टाको शीर्ष गतिको लागि ,000००० वाटको इलेक्ट्रिक मोटर छ।
Oot० किमीको दायरामा स्कूटरमा लिथियम ब्याट्री छ। चार्ज समय hour०% चार्जको लागि १ घण्टा हुन्छ।
स्कूटर कुनै पनि र colorमा उपलब्ध छ र फोन्जलाबद्वारा निजीकृत गर्न सकिन्छ।
हामी सबैले हाम्रो सवारीबाट भिन्न थ्रिल्स र अनुभव चाहन्छौं र फोन्जलाबमा हामी यो गर्छौं। यहाँ तपाईंको Fonzarelli तपाईंको जीवनशैली अनुरुप निजीकृत छ। वर्धित प्रदर्शन र टेक अपग्रेडबाट, bespoke स्टाइलिंग।
2020 Fonzarelli मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै Fonzarelli स्कूटरहरू हेर्नुहोस्: